By vijayafm on	 July 2, 2019 सम्पादकीय
सबैजसो स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट र नीति तथा कार्यक्रम आइसकेका छन् । गैँडाकोट नगरपालिकामा बुधबार कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक हुँदै छ । बजेट पूर्ण नआउने देखिन्छ । आषाढ २१ सम्म पूर्ण बजेट आउने अनुमान छ । बुधबार नीति तथा कार्यक्रम आउनेछ । अघिल्लो वर्ष करिब ६२ करोडको बजेट आएको थियो । आन्तरिक राजश्वको आकार ठूलो छैन । यसकारण पनि बजेट ठूलो आउने देखिँदैन । केन्द्र र प्रदेशका योजनाका कारण केही बजेट बढ्ने मात्र अनुमान गर्न सकिन्छ । बजेटभन्दा पनि कार्यक्रम र योजना नै महŒवपूर्ण हुन् । गैँडाकोटको समृद्धि लागि नीति तथा कार्यक्रमले नै तय गर्दछ । राम्रा योजना र कार्यक्रम आए मात्र समृद्धि सम्भव छ । समृद्धिको नारा दिएर मात्र समृद्धि हुन सक्दैन । समृद्धिका लागि नगरको वर्तमान अवस्था के हो ? आधार तय हुन जरुरी छ ।
गैँडाकोट नगरपालिकाको वर्तमान अवस्था कहाँ छ ? यसको मापन पहिला हुनुपर्दछ । नगरको स्पष्ट प्रोफाइल बिना कसरी बजेट र कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ । नगरभित्र लक्ष्यित समुदायको अवस्थाका बारेमा स्पष्ट तथ्याङ्क नहुँदै गर्दा लक्ष्यित समुदायभित्रको लक्ष्यित वर्ग कुन हो कसरी पहिल्याउन सकिन्छ ? यसकारण पनि विगतमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ । गैँडाकोट नगरपालिकाको समृद्धिका लागि विकास निर्माणका सबै क्षेत्रमा समुचित कार्यक्रम लिएर जानु जरुरी नै छ । यसका साथै नगरको पहिचान झल्कने कार्यक्रम अघि सार्नु पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ । कार्यक्रम व्यवहारमुखी हुनु जरुरी छ । जनप्रतिनिधिले निर्वाचन जित्नका लागि अघि सारेका महŒवाकांक्षी योजनामा प्रवेश गर्नै नसक्नुबाट पाठ सिक्न जरुरी छ ।
भौतिक विकासतर्फ पनि अधिकांश बजेट सडकमा बगाउने परिपाटीले समृद्धि लिएर आउन सक्दैन । जहाँ उत्पादित सामग्रीको बजारीकरण गर्न समस्या छ त्यस्तो स्थानमा सडक निर्माण पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । जहाँ उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्न सडक बाधक छैन त्यहाँ कृषिको आधुनिक प्रणालीको विकास गर्न र किसान प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू अघि सार्नु जरुरी छ । जहाँ सडक निर्माण गर्न समस्या छ र पर्यटनको पनि सम्भावना छ, त्यस स्थानमा पदमार्गको विकास गरी पर्यटक भित्र्याउने कार्यक्रमहरु नीति तथा कार्यक्रममा आउन जरुरी देखिन्छ ।